N'Anambra: Pastọ Egbuola Nwadibịa, Sị Na Ọ Bụ Chineke Gwara Ya Gbuo | Igbo Radio
N'Anambra: Pastọ Egbuola Nwadibịa, Sị Na Ọ Bụ Chineke Gwara Ya Gbuo
Igbo sị na ọ na-abụ onye a gwara agwa mana ọ nụghị anụ, o mee emee, ọ hụ ahụ.
Ka ọ dị taa, ndị ọrụ uweojii n'ime steeti Anambra anwụchiela onye pastọ (bụ onye ọrụ ụka) maka iji mmà gbuo otu nwadibịa aha ya bụ bụ Maazị Oliver Chukwudi Ugwu (gbara ahọ iri isii) ma biri na mpaghara Umusiome dị na Nkpor n'okpuru ọchịchị ime obodo 'Idemili North'.
Dịka ọnụ na-ekwuru ndị uweojii na steeti ahụ, bụ SP Haruna Mohammed siri kọọ, nwa amadi ahụ e gburu egbu bụ onye obodo Abor dị n'okpuru ọchịchị ime obodo Udi nke steeti Enugu; ebe pastọ ahụ gburu ya egbu bụ Maazị Uchenna Chukwuma (gbárá ahọ iri abụọ na otu) ma bụrụkwa onye obodo Amagunze dị n'okpuru ọchịchị ime obodo 'Nkanu East' nke steeti Enugu. Ha abụọ bikwà na mpaghara Umusiome dị na Nkpor, n'okpuru ọchịchị ime obodo 'Idemili North' nke steeti Anambra.
Oge a na-agba ya ajụjụ ọnụ banyere ihe mere o jiri gbuo nwadibịa ahụ, ya bụ nwoke kwuru ọ bụ pastọ, ma kọwaa na ọ bụ Chineke zigara ya ka o gbuo nwoke ahụ. O kwuru na nwadibịa ahụ anaghị ekwe ya ñụrụ mmiri tọgbọ iko, nke na ọ na-enyekwuzị ya nsogbu n'ime mmụọ, ma na-egbochikwa ya ịga n'ihu n'ihe nke mmụọ maọbụkwanụ ịkpata ego.
Ndị uweojii gakwazịrị n'ebe ahụ ya bụ ihe nọrọ mee ụbọchị ahụ, ma jiri anya ha hụ ka ọnọdụ siri gbata kwụrụ. E bukwara nwadibịa ahụ ya na ọbara nille juru ya n'ahụ wee gaa ụlọọgwụ Iyi Enu dị n'Ogidi, bụ ebe dọkịta nọrọ wee lelechaa ya ahụ, wee gwa ha na ụkwa a na-apị, na mkpụrụ adịghị ya; nke pụtara na ya bụ nwoke alaala mmụọ. E mechaziere dọnye ozu nwa amadi ahụ n'ụlọ nchekwa ozu dị n'ụlọọgwụ ahụ.
Ndị uweojii ahụ napụtakwara pastọ ahụ mmà ahụ o jiri gbuo ya bụ nwoke, ma werezie okwu ahụ nyefèé n'aka ngalaba 'State Criminal investigation Department' dị n'Awka maka ime nnyocha miri èmì, nke, mgbe e mechaara ya, a kpụpụ ya ụlọikpe, ebe a ga-anọ kpee ya ikpe maka ihe o mere.
Ndị Uweojii Anambra Anwụchiela Mmadụ Abụọ Na-Ama Aka Akpa n'Ọnịtsha
Achbishọọpụ Okeke Arụọrọla Onye Enweghị Aka Ụlọ Ọhụụ Na Nteje
Korona: Ndị Anambra Bi U.S.A. Ebunyela Gọọmenti Akụrụngwa Nchekwa Ahụike
Adaz-Nnukwu Bụ Obodo Kacha Eme Nke Ọma n'Ịkwàdò Ọba Akwụkwọ —Udeze